Daaha Birta 2.0: Belarus waxay muwaadiniinta ka mamnuucdaa inay ka baxaan waddankooda
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Belarus Jebinta Wararka » Daaha Birta 2.0: Belarus waxay muwaadiniinta ka mamnuucdaa inay ka baxaan waddankooda
Airport • Aviation • Belarus Jebinta Wararka • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • News • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Muwaadiniinta Belarusia ma lahan sababo ay uga baxaan dalka, saraakiisha gobolka ayaa sidaas leh.
Belarus waxay ka hortageysaa muwaadiniinteeda inay u safraan dibadda
Belarus waxay sheeganeysaa mamnuucida ka bixitaanka inay lagama maarmaan tahay in la joojiyo faafitaanka cudurka faafa ee COVID-19
Belarus 'dadaalkeeda gudaha ee lagu xakameynayo faafitaanka fayrasku gebi ahaanba ma jiro
Saraakiisha xuduudaha ee Belarusiya ayaa xoojiyay dadaalkooda si looga hortago muwaadiniinta Belarus inay isku dayaan inay u safraan dalka.
Kaliya muwaadiniinta Belarus ee loo oggol yahay inay ka baxaan Belarus ayaa ah kuwa haysta caddeynta degenaanshaha joogtada ah ee dal shisheeye.
Guddiga Xuduudaha Gobolka Belarusiya ayaa bayaan ay soo saareen todobaadkan waxay ku sheegeen inay "dhawaanahan heleen codsiyo badan" kuwa doonaya inay ka baxaan dalka. “Waxaan si rasmi ah u cadeynay in laga bilaabo 21-ka Diseembar, 2020, ka bixitaanka si ku meel gaar ah loo hakiyay muwaadiniinta Belarus.”
Marka laga reebo, saraakiishu waxay yiraahdeen, waxaa loo samayn doonaa oo keliya kuwa leh caddeynta degenaanshaha joogtada ah ee dal shisheeye. Kuwa haysta fiisooyinka ama deganaanshaha ku meel gaarka ah "ma laha sababo ay uga baxaan waddanka."
Tallaabooyinka adag ee xadka, ayay mas'uuliyiintu ku andacoodaan, inay lagama maarmaan u yihiin joojinta faafitaanka cudurka faafa ee COVID-19. Si kastaba ha noqotee, waxay la jaanqaadayaan dadaalka gudaha ee Belarus ee aan jirin si loo xakameeyo faafitaanka fayraska. Muwaadiniinta ka soo laabanaya dibedda looma baahna inay qaataan tijaabada coronavirus, waddankuna wuxuu si isdaba joog ah u diiday inuu soo bandhigo xirnaanshaha qaranka.
Bilowgii masiibada, kaligii taliyihii Belarusiyaanka Lukashenko wuxuu ku dhawaaqay in cabitaanka vodka iyo booqashada sauna ay noqon doonto habka ugu wanaagsan ee looga hortagi karo COVID-19. Waxa kale oo uu sheegay in ciyaar isboorti oo habaysan ay ahayd daawo wax ku ool ah, iyo in “ay ka wanaagsan tahay inaad ku dhimato istaagista cagahaaga inaad ku noolaato jilbahaaga.”
Kaligii taliyihii Belarus iyo booliiskiisii ​​qarsoodiga ahaa waxay soo jiiteen duufaan cambaareyn adduunka ah usbuucii la soo dhaafay ka dib markii a Ryanair Duulimaadkii ka yimid Griig kuna socday Lithuania waa la afduubay waxaana lagu qasbay in uu caga dhigto Minsk May 23-keedii. Markii ay wadada laamiga maraysay, wakiilada amaanka ee dowladu waxay isla markiiba xireen tifaftiraha kanaalka Telegram ee la mamnuucay, Roman Protasevich, iyo saaxiibtiis, muwaadin Ruush ah Sofia Sapega, kuwaas oo ka mid ahaa. rakaabka duulimaadka.
Midowga Yurub, oo ku tilmaamay afduubkii diyaaradda Ryanair "burcad-badeed", waxay hadda diyaarinaysaa xirmo cunaqabateyn ah oo la saarayo shirkadda duulimaadyada qaranka ee Belarus, iyo sidoo kale illaa toban sarkaal oo ka tirsan duulimaadyada. Belavia, oo sidata calanka dalka, ayaa si habsami leh looga mamnuucay hawada dalalka xubnaha ka ah EU-da laga soo bilaabo toddobaadkii hore, in badan oo ka mid ah shirkadaha diyaaradaha ee reer galbeedka ayaa qaadacaya waddooyinka mara Belarus.
Sida laga soo xigtay dibloomaasi reer yurub ah oo aan la magacaabin, "dhamaan dawladaha EU waxay ku raacsan yihiin qaabkan." Danjiraha labaad wuxuu intaas ku daray in cunaqabateyntan cusub ay "calaamad cad u noqon doonto Lukashenko in ficilladiisu ay khatar ahaayeen oo aan la aqbali karin."